PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-08-27 - Yicala ukuthinta izinqe zosebenza naye
Yicala ukuthinta izinqe zosebenza naye
Isolezwe ngeSonto - 2017-08-27 - IMIBONO - KHETHA SANGWENI
NJENGOBA sesiyisonga inyanga yembokodo, kubalulekile ukuthi sikhulume ngezingqinamba ehlangabezana nazo ezindaweni zokusebenzela.
Abantu abaningi bayithatha kancane indlela abathinta ngayo neyokukhuluma nozakwabo. Kwesinye isikhathi bagcina sebehlukumezeka ngokocansi benganakile, ngenxa yokwentula ulwazi. Ziningi izigameko zokuhlukumezeka ngokocansi ezenzekayo emsebenzini, ezinye ziyabikwa ezinye azibikwa.
Abaningi baphaphama ngoba sebesobishini sebebhekene necala lokubotoza, noma okukhulunywe kuye amazwi ahambisana nokuhlukumeza ngokocansi.
Kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi kuyenzeka abantu abasebenza ndawonye bathintane, baxoxe ngezinto ezahlukene, kodwa okubalulekile yindlela abathintana ngayo.
Ukuthintana okufana nokuxhawula, ukwanga, ukubingelelana nokuxoxa ngezinto ezithinta umsebenzi njalonjalo akunankinga. Inkinga enkulu iqala uma sekukhona oweqa umugqa, njengoba lokhu kuthintana nokuxoxa kungafanele kweqe ezingeni elithize.
UNksz Lusanda Myoli okhulumela uphiko oluxazulula amacala abasebenzi i-CCMMA kuzwelonke, ukuchaza kabanzi lokhu kuhlukumezeka.
Uthe kuyinto ehambisana nokuthinta umuntu ngendlela engamukelekile ezindaweni ezingafanele, njengezinqe amabele, intamo, ubuso, imilenze nezinye izindawo. Uthe ngisho ukushayela ikhwelo owesifazane okuhambisana namancoko anocansi kuwukumhlukumeza ngokocansi.
“Okunye kuhambisana nokubuka umuntu njengokumpopola endaweni yokugezela, noma lapho eshintsha okukugqoka. Lowo osuke ethintwa noma enziwa konke lokhu engahambisani nakho, usuke esehlukunyezwe ngokocansi,” kusho uNksz Myoli.
Uthe lo mkhuba uhambisana nokuthumela imiyalezo nezithombe ezihambisana nocansi kuzakwenu emsebenzini. Uthe kuyinto engamukelekile.
Ukhulume nangomkhuba wokuthi abesifazane baphoqwe ukunikela ngocansi ukuze bathole amathuba omsebenzi. Uthe okunye okufanele kuqaphelwe, yindlela okuseshwa ngayo uma kunesidingo sokusesha ngezizathu zezokuphepha. Uqhube wathi abaqaphi besifazane, kufanele beseshe abasebenzi besifazane, kanjalo namadoda aseshwe ngamanye ukuze kuqinisekiswe ukuthi akekho opotozwa ngendlela angayithandi.
“Izinto ezifana nokuthi uye ocansini nomuntu ukuze ukhushulelwe isikhundla noma uthole umsebenzi. Zonke lezo zenzo ziphambene nomthetho wabasebenzi, futhi zithathwa njengokuhlukumeza ngokocansi emsebenzini,’’ kusho uNksz Myoli.
Uthe kusukela ngo-Ephreli kuya kuJulayi kulo nyaka abalelwa ku-595 amacala asefike ezandleni zabo aphathelene nokuhlukumezeka ngokocansi emsebenzini.
Umethuli wohlelo iKhumbul’ ekhaya kwiSABC 1, u-Andile Gaelisiwe oxoxe naleli phephandaba elilandisa ngesigameko sokuhlukunyezwa ngokocansi endaweni yokusebenzela esake samehlela. Uyale abesifaane ukuthi bazihluphe ngokwazi imithetho yenkampani ebavikelayo ekuhlukumezeleni ngokocansi emsebenzini.
“Kwake kwangehlela, ngalubika udaba, kodwa angiphumelelanga ngenxa yokushoda kobufakazi. Lezi zinto zokuhlukumezeka ngokocansi ziyenzeka kakhulu ezindaweni zokusebenza. Kubalulekile ukuthi lowo ohlukunyezwayo akhulume nomuntu amethembayo, bese ebika enkampanini,” kusho u-Andile.
Uthe isizathu esamenza wayeka umculo, ukuthi ziningi izimpisi zamadoda endimeni yezokungcebeleka ezihlala zihansele ukuthi zilale nabantu besifazane ukuze bathole usizo.
“Kwangihlula ukunikela ngomzimba wami ukuze ngiphumelele. Ngaze ngayeka ukucula ngoba ngangihlangana nabantu abathi bazongisiza uma ngilala nabo. Akufanele uma ungumuntu ujahe udumo ugcina ukhohlwa yisithunzi sakho, ngoba ngisho ungalala naye uphumelele, kodwa kuyogcina kuvelile ungene ehlazweni,” kusho u-Andile.
Uxwayise imbokodo esafuna amathuba emkhakheni wezokungcebeleka ukuba iziqaphele izimpisi zamadoda afuna ucansi kubantu ngoba behluphekile. Uthe bangesabi ukuwabika amacala uma kubehlela ukuhlukumezeka noma kungasekhona ezindaweni zokusebenzela.
Esinye isibonelo abaningi abazosheshe basikhumbule sokuhlukumeza ngokocansi endaweni yokusebenza, yileso esathinta uNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli uMnuz Jeff Radebe.
Kwaputshuka izindaba zokuthi uRadebe ucele intokazi engumthwebuli ukuba imthumelele izithombe zayo inqunu nokwamfaka ehlazweni elikhulu.
Wagcina ezehlisile wafongqa isigqoko, waxolisa emndenini wakhe nakuwo wonke umuntu njengoba engumholi womphakathi. Izigameko ezifana nalezi, zisikhombisa ngokusobala ukuthi miningi imikhuba egilwayo emsebenzini.
WAKE wahlangabezana nenkinga yokuhlukunyezwa ngokocansi emsebenzini umethuli wohlelo iKhumbulekhaya u-Andile Gaelisiwe Isithombe: SIGCINIWE KUYICALA elibomvu ukupotoza uzakwenu emsebenzini
Isithombe: HUFFINGTON POST